Ama-Vouchers e-Meal E-elekhthronikhi - eToduba
I-PastoPay yamaphuzu wokuqabuleka
Amakhuphoni weSidlo Se-elekhthronikhi okusheshayo futhi kulula
I Amakhuphoni weSidlo se-elekhthronikhi IToduba ozalwe izinkampani zamahhala kusuka kunoma yikuphi ukukhathazeka nezindleko zabasebenzi ezinikezelwe ekwakhiweni kwendabuko Izaphulelo zokudla ephepheni. Okuyintsha nokusetshenziswa okukhulu kwalokhu izaphulelo zokudla amanga enduduzweni yabo. Eqinisweni, azikwazi ukulahleka futhi azikhohlwa. Ngaphezu kwalokho, ngeke kusadingeka ukuthi uchithe iphepha noma ipulasitiki ukulenza, ngoba ngokuphelele ngogesi. Futhi-ke, ngokubakhetha uzophinda ufake isandla ekwenzeni umnikelo omkhulu kwezomnotho oluluhlaza.
Ama-Vouchers e-Meal E-elekthroniki enza ngcono izinkampani nezinsizakusebenza zenkampani
Nikeza i Izitembu zokudla kubasebenzi babo bangaba umsebenzi onzima futhi obizayo weinkampani. Kudinga ukusetshenziswa kwabasebenzi ababhalise i okuhle, babhale bese ubabela abasebenzi. Noma icela ukukhipha lo msebenzi kubasebenzi bangaphandle, ngaleyo ndlela kuthinte kakhulu izindleko zebhizinisi.
NgePastoPay Toduba konke kubhalisiwe
I I-MealPay kudalwe ngu IToduba baxazulula zonke izinkinga zenhlangano ezidalwe izaphulelo zokudla iphepha noma amakhadi kagesi. Eqinisweni, babhalisiwe epulatifomu eliku-inthanethi elirekhoda zonke izinyathelo ezihlobene nokusetshenziswa kwazo. Ukusuka ekuhanjisweni kuya kusisebenzi kuze kube kusetshenziselwa kwabo a indawo yokuqabula, impilo yonke ye ivawusha yokudla kagesi iqoshwe ngesikhathi sangempela.
Ngamakhuphoni e-Meal Ekhompyutha inkampani yakho iyasindisa futhi isiza imvelo
I I-MealPay Sono i Amakhuphoni weSidlo se-elekhthronikhi ukukukhulula kunoma yikuphi ukukhathazeka nezindleko zabasebenzi abazinikele. Kepha hhayi kuphela. Uzogcina usebenzisa iphepha neplastiki lapho okuvame ukwenziwa khona kwendabuko Izaphulelo zokudla ephepheni noma amakhadi kagesi. THE Amakhuphoni weSidlo se-elekhthronikhi IToduba ziyachuma futhi zikwenza uhloniphe imvelo.
I-PastoPay: amakhuphoni alula, asheshayo futhi ahlelayo
Yabela i Amakhuphoni kagesi abasebenzi bazoba umoya oshaya izinkampani kusukela manje. THE I-MealPay eqinisweni ahlelekile futhi angakhishwa ngokuzenzakalelayo futhi ahlelwe, ngaphandle kokuchitha isikhathi ngokungadingekile. Uzoba nayo yonke inqubo elawulwa futhi ngeke usaba sengozini yokulahlwa kukadoti okungadingekile. Ngisho nabasebenzi bakho, sebenzisa i IVoucher PastoPay kuzoba lula kakhulu futhi kusheshe.
I-PastoPay yeAmaphuzu Wokuvuselela
Amakhuphoni Okudla Kwama-elekhtha:
umcimbi olingayo nowenzelwe amaRechateurs
Ubuhle be izaphulelo zokudla zikagesi ngoba i I-dakateurs nakho konke Amaphoyinti wokudla ukuthi ziletha amakhasimende aphindaphindwayo kusikhungo sakho. THE I-TODUBA PASTOPAY kuzosiza ukukhulisa amakhasimende abo bonke I-dakateurs, lo ama-pizza, lo ukuthathai Ezokuzisiza nabo bonke abanye Amaphoyinti wokudla ngubani onquma ukujoyina isekethe ye IToduba.
Abanikazi bezindawo zokudlela kanye nabadli bezindawo zokudlela bazoba nesikhathi esilula ne-PASTOPAY
I Amakhuphoni weSidlo se-elekhthronikhi IToduba baba yimali ngamahora angama-48. THE Izindawo zokudlela ngeke besadingeka babhekane namabhlogo wamaphepha okufanele abalwe noma amakhadi we-elekthronikhi. Konke kuzoba okuzenzakalelayo, okusheshayo, okusebenzayo. Njalo I-MealPay ibhaliswa ngokuzenzakalelayo. Lutho izaphulelo zokudla elahlekile. Azikho izindleko ezifihliwe. Izinzuzo kuphela kanye nokusebenza kahle.
Ukujikeleza kwamaphuzu wokuqabuleka ekuvumeni kwe-wave sibonga kuToduba
Ngokujoyina iToduba, konke Izindawo zokudlela eu Amaphuzu Wokuvuselela bayoba yingxenye yesekethe enenhlanhla ebeka izinkampani ezamukela ezethu ngokuxhumana okuqondile Amakhuphoni weSidlo se-elekhthronikhi nazo zonke izindawo futhi Amaphoyinti wokudla lapho ungazisebenzisa. Konke kucacile, kuyakhazimula futhi kuyashesha. Akukho kudideka futhi akukho ukuchitha isikhathi.
I-PastoPays inxephezela wena ngokushesha ngezinsizakalo zakho zokudla
Konke i Izindawo zokudlela eu Amaphuzu Wokuvuselela abavuma Amaphepha Okudla Kwamaphepha bayazi ukuthi kungaba nzima kangakanani ukukhokhelwa ngezinsizakalo ze Izindawo zokudlela kuhlinzekiwe. Nami i I-MealPayesikhundleni salokho, uzothola isinxephezelo masisha i-i izaphulelo zokudla isetshenziswa ebhizinisini lakho.
IPastoPay ilungele nezinombolo ze-VAT
Futhi i Ngiyazisebenza angasebenzisa ngokunenzuzo lula kanye nokusebenza kahle kwe I-MealPay. ke ivawusha yokudla kagesi empeleni, ilungele nalabo abanayo inombolo ye-VAT. Kuzoletha ukuhleleka nokuthula emhlabeni we Ngiyazisebenza ukuthi ngeke besadingeka ukuba bakhathazeke ngaso sonke isikhathi lapho kukhuphuka ithikithi elidala eliphansi ezansi ephaketheni pasto kudliwe izinyanga ngaphambi.
Ufuna ukwazi okuningi okwakho Abasebenzi?
Umuntu othintekayo onokwethenjelwa
Uyi Indawo yokuqabula futhi ufuna ukwazi okuningi? Xhumana nathi.
I-copyright © 2019 TrovaWeb srl - Via Ansaldo Patti, 28/30 - 98121 Messina (ME) - Italy
Imali yokwabelana € 10.000,00 ekhokhelwe ngokuphelele - inombolo ye-VAT 03553530837 CF - REA 245342